From 200 Lakhs To 300 Lakhs Apartments for Sale in Thaketa
Ad Number S-8259106
Ad Number S-8257340
(၅) လှာ၊ အပျေါဆုံးထပျ၊ (18 × 54) ပေ၊ မာနျပွလေမျးသှယျ၊ သာကတေမွို့နယျ
Ad Number S-8251702
သာကေတမြို့နယ် ၆ရပ်ကွက် ရွှေပြည်သာလမ်း နှင့် ဇဗူသီရိလမ်းထောင့် ပေ ၁၈ × ပေ ၅၄ Hall တိုက် ၆လွှာ...
Ad Number S-8185535
သာကေတ ၇ ရပ်ကွက် မြေနီလမ်းတွင် ပေ ၁၈ x ပေ ၅၄ Hall Type ၆ လွှာ ထပ်ခိုးတင်လို့ရပြင်ဆင်ပြီး...
Ad Number S-8185534
Ad Number S-8169269
၁၂ပေခှဲ၄၅ပေပထမထပျ၂၁၀တအိမျလုံးပါ ကခေငျး ၂စြေးအနီး
Ad Number S-8160766
သာ​ကေတ မြို့ နယ်​ ရှုခင်းသာမြို့ ပတ်​လမ်းရှိ အရှုပ်​ရှင်းကင်း5လွှာတိုက်​ခန်းကျယ်​...
Ad Number S-8156926
သာကေတမြို့နယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း၊ (၆) လွှာရှိ တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
Ad Number S-8150475
Green Rose Real Estate Close
​ဒေါပုံမြို့ နယ်​ သ​ဘောင်္ကျင်း လမ်းသွယ်​ရှိ ​ဈေးတန်​ အလွှာနိမ့်​ တိုက်​ခန်းသစ်​ ...
Ad Number S-8145446